သတင်း - ၂၀၂၀ ပါရီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျက်မှန်ပြပွဲတွင် SILMO ပြခန်း
SILMO ပြပွဲသည် ၂၀၂၀ Paris Paris International Optics Fair တွင်
SILMO2020, Paris International Optical and Optical Fair, ယခုလောလောဆယ်ကြိုတင်မှာကြားနေပါသည်။ SILMO France International Optical Fair သည်နှစ်စဉ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နိုင်ငံတကာတွင်ထင်ရှားသောပြပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၆၇ တွင်စတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ကပ်ရောဂါ၏ဒဏ်ကြောင့်ယခုနှစ်ပြင်သစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျက်မှန်ပြပွဲသည်ဥရောပ၌အရေးအပါဆုံးသောပြပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ပြင်သစ်စည်းရုံးရေးကော်မတီနှင့် China Optical Association တို့ကမင်းရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပါဝင်မှုရန်ပုံငွေအတွက်လုံခြုံရေးအာမခံချက်အပြည့်အဝပေးနိုင်ဖို့ညှိနှိုင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
ပြပွဲအချိန်: ၂၀၂၀ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်မှ ၅ ရက်
ကျင်းပမည့်နေရာ-ပြင်သစ်-ပါရီ-ပါရီ NORD VILLEPINTE မဏ္avilပ်
စီစဉ်သူ - COMEXPOSIUM၊ ပြင်သစ် Gaomei Aibo ပြပွဲအုပ်စု
Hong Kong Optical Fair ကိုဟောင်ကောင်ကုန်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စီမှလက်ခံကျင်းပသည်။ ၎င်းသည်အာရှ၏ ဦး ဆောင် optoelectronics စီးပွားရေးပလက်ဖောင်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအာရှတွင်အကြီးဆုံးမျက်မှန်ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်ထိအစည်းအဝေး ၂၇ ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးတစ်ခုစီသည်ရလဒ်ကောင်းများကိုအမြဲတစေရရှိခဲ့ပြီးအဆက်မပြတ်ထူးချွန်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုအသစ်ပြသခဲ့ပြီးအာရှ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမျက်မှန်ပွဲတစ်ခုအဖြစ်၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့သည်။ <Subsidy New Deal! ! ! >
ဟောင်ကောင်အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသအစိုးရသည်မကြာသေးမီကနောက်ဆုံးရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်တွင်ကြေငြာခဲ့သောရန်ပုံငွေအစီအစဉ်၏အခြေခံပေါ်မှထောက်ပံ့ငွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ (အများဆုံး ၁၀ ခန်းသို့မဟုတ်ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀)
ထို့ကြောင့်မှတ်ပုံတင်ရန်နောက်ဆုံးရက်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်သို့ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ပါသည်။ သင်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရန်စိတ်ဝင်စားပါကကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းပါ။
Bifocal မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားများ PPT